नेकपा फुटे दोष कसको ? Canada Nepal
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद समाधान भइसकेको छ । आगामी सचिवालय र त्यसपछिका पार्टीका अन्य तहमा हुने बैठकले नेकपाको विवादको आगामी स्वरुप र समाधानबारे थाहा हुनेछ । तर, अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको टकराव मथ्थर हुने अवस्था देखिँदैन । सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आफूमाथि गम्भीर निराधार आरोप लगाइएको भन्दै ओलीले यसको जवाफ दिन १० दिनको समय माग गरेका थिए ।
यही मंसिर ३ बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लिखित रुपमा आफूले जवाफ दिने र यसका लागि १० दिनको समय मागिएपछि अब नेकपाको आगामी बैठक मंसिर १३ बस्ने भएको छ । तर, यसअघि अहिले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा देखिएका छन् । दुवै प्रतिवेदन सचिवलाय, स्थायी, केन्द्रीय कमिटीलगायतका बैठकमा छलफल हुने र उक्त बैठकले गर्ने निर्णय स्वीकारेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड समूह रहेको छ ।
विवाद बढिरहँदा दुवै पक्ष एकअर्कालाई पार्टी विभाजन गराउन उद्दत रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । आफ्नो समूहबाट पार्टी फटाउने कार्य नहुने दुवै पक्षको जिकीर छ ।
सोमबार टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेलसँगको भेटमा प्रचण्डले पार्टी एकता आफ्नोतर्फबाट टुट्न नदिने र कुनै पनि शर्तमा पार्टी फुट्न नदिने बताएका छन् । उनले आफ्नो प्रस्तावले पार्टी नफुट्ने जिकीर गरे ।
तर, ओली समूहले प्रचण्ड पक्षधरहरु पार्टी विभाजन गराउन उद्दत रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
पार्टी विभाजन भए दोष कसको ?
ओली–प्रचण्ड दुवै पक्षले एकअर्कालाई पार्टी फुटाउन लागिपरेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, पार्टी विभाजन भएमा दोष कसको ? भन्ने प्रश्नले नेकपालाई घेरेको छ । पार्टी विभाजनको कलंकको टीका लगाउन दुवै समूह चाँदैनन् । तर, विवाद बढ्दै जाँदा विभाजन हुने नेकपाका नेताहरु बताइरहेका छन् ।
प्रचण्ड पक्षधरले आफूहरु नभई अध्यक्ष ओली नै पार्टी फुटाउन उद्दत देखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पार्टीको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने र जसले मान्दैन उसैले पार्टी विभाजनको दोष बोक्नु पर्ने प्रचण्ड पक्षधरको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टी निर्णय नमानेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यता पार्टी विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई असहयोग गर्नेहरु दोषी हुने ओली समूहको भनाइ छ । सरकार तथा पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले असहयोग गरेको ओली पक्षधरहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १२:०५:०३ बजे : प्रकाशित